Artemis iyo muuqaalka kicinta leh ee haweeneyda astaanta NASA | Abuurista khadka tooska ah
Waqtiyada ayaa isbadala iyo xoogga dumarka oo soo baxa dhammaan tamarta suurtogalka ah sidaa darteedna ay hadda tahay NASA oo ay ku jirto iyada oo ah halyeeyada astaanteeda cusub. Sidaas ayuu u dabaaldegayaa markii haweeneydii ugu horreysay loo diray dayaxa.
NASA A aan u naqaano xiisaha uu u qabo astaamaha tayo sare leh ee naqshadeynta iyo in astaanta loo yaqaan 'Artemis mission' ay u adeegsatay sawirka kacsiga leh ee haweenka. Astaan ​​ku jirta nashqadda oo in ka badan ka sarreysa oo caleemo bixin daabacday macnaha weyn ee ay u leedahay xilliyadii aan ku noolaan lahayn.
Waxaa jira macno gaar ah oo loo leeyahay magaca barnaamijka Artemis. Hawlgalkii ugu horreeyay ee dayaxa, Apollo, magacan oo ah ilaahyadii hore ee Griigga ayaa la adeegsaday. Y Artemis waa mataanaha mataanaha ah ee Apollo sida ilaahadda dayaxa.
Waana mid intaas ka sii weyn macnaha howlgalka cusub ee NASA waxay leedahay hadafka ah in dayaxa loo diro lab iyo dhadig. Xitaa wuxuu tusay qol banaan oo aan ku arki karno labo cirbixiyeen, lab iyo dhedig ah, oo tijaabinaya wanaaggooda iyo faa'iidooyinkooda.
Artemis waxay leedahay hawlgal ay ku soo bandhigto dhammaan dadaalladii NASA iyo waddanka Mareykanka inay ku noqoto dayaxa iyo inay haweeneydu sidato laambadda ugu ifaysa. Waxayna noqon doontaa tooshkan oo wadada u furaya howlgalka xiga, kaas oo noqon lahaa meeraha Mars; runti waxaad haysaa taxane boodhadh ah oo ay samaysay NASA dhawr sano ka hor oo ay weheliso Mars sidii bandhig iyo ujeedo.
Un Astaanta Artemis oo nalalka iyo hoosku ku sawiran yihiin oo ah dayax madoobaad leh sawirka haweeneyda qaab aad u kacsan. Tusaale lagu daydo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Astaanta cusub ee NASA ayaa u dabaaldegeysa haweeneyda dayaxa u dirtay